यी हुन् विधि र विकासे प्रधानमन्त्री ?
हामीले कसरी विश्वास गर्ने, नेदरलेण्डका प्रधानमन्त्री हरेक दिन साइकलमा कार्यालय जान्छन् र फर्कन्छन् । उनले सफलतापूर्वक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका छन् । उनको प्रशंसा नगर्ने विश्वमा कर्म नेताहरु रहेका छन् ।
धनी देश हो नेदरलेण्ड । पैसा नभएर साइकल चढेको होइन । उनी एक उदाहरण बन्न चाहन्छन् र जनताको प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मार्क रुटको यो सिको नेपालले गर्न सकेको भए विकासका काम धेरै बढेको अवस्था हुनेथियो ।
कारण, निर्वाचन आयुक्तलाई ३ करोडको गाडी चाहिने, प्रधानमन्त्री १५ करोडको गाडीमा हिड्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले १५ करोड बजेट निकासा मागेको गाडी किन्नकै लागि हो । हजारमा तलव खाने कर्मचारी बर्ग करोड करोडको गाडी चढ्छन् । विकास योजनाहरुमा करोडका गाडी कति छन् कति ? आखिर नेपाल बिग्रेको यस्तै पाराले हो । आफ्नो हैसियत र औकातलाई ध्यानमा राख्न नसक्दा नेपाल विकास गर्ने बजेट गाडी र धुवाँमा उडाइरहेको छ ।
गाडीकै कारण राष्ट्रपती–उपराष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्टहरु घरबाट निस्के कि बटुवा, अन्य सामान्य सवारी चालकहरुले दिनुसम्मको दु:ख दिन्छन् । कारण सडक जाम हुन्छ । घण्टौंदेखि सवारी बन्द गरेर ट्राफिकले सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउँछ । यिनलाई कसको खतरा छ, कसैलाई पनि थाहा छैन ।
अमेरिका, रुस, बेलायत, भारत, इजरायल लगायतका राष्ट्रप्रमुखको भन्दा धेरै सुरक्षा नेपालका राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई दिइन्छ । तर संसारकै धनी देशहरु मध्येको नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुथ भने साधारण साइकलमा चढेर आफ्नो कार्यालय सम्हालीरहेका छन् ।
नेदरलेण्ड संवैधानिक राजतन्त्र मुलुक हो । त्यहाँ अनुशासन, मितव्यिता र असल संस्कार र नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइन्छ । भनिन्छ, नेताहरुले संस्कार सिकाउने हो, यसकारण नेताले जथाभावी गर्दैनन् । हाम्रो देशमा नेताहरु अनियमितता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचार गर्न सिकाउँछन्, त्यसैले त डनले चुनाव लड्छ, अपराधीले मुक्ति पाउँछ र देशमा अपराधतन्त्र मौलाइरहेको छ । लोकतन्त्र आयो भनेर के भन्नु, लोकलाज नै हराउँदै गएपछि । अचाक्ली नै भयो अव त ।